५ रुपैयाँमा खाना बेचेको दुई महिनाको यतिधेरै पैसा बोकेर भावुक हुँदै कुमार मिडियामा,के भयो अचानक यस्तो! (हेर्नुहोस भिडियो) - Complete Nepali News Portal
५ रुपैयाँमा खाना बेचेको दुई महिनाको यतिधेरै पैसा बोकेर भावुक हुँदै कुमार मिडियामा,के भयो अचानक यस्तो! (हेर्नुहोस भिडियो)
झापाको दमकमा बिगत महिनौंदेखी पाँच रुपैयाँमा सादा खाना दस रुपैयाँमा मासुभात अनि एक रुपैयाँमा सुत्ने होटलको ब्यबस्था गरेर दमकका युवाहरूले नेपालमै अचम्मको काम गरेका छन । दैनिक छ सयदेखी एक हजारसम्म मानिसहरुले त्यहाँ खाना खाइरहेको अभियानमा सक्रिय अभियानता कुमार राइले बताएका छन । कुमार राई योवन गुरुङ लगायतका दमकका धेरै समाजसेवी युवाहरुले चलाइरहेको कार्यक्रममा धेरैले सहयोग गरिरहेका छन ।
त्यसैपनी बाटोमा चिसोमा सुतेका सडक बालकदेखि वृद्धबृदाहरुको लागि पनि निकै राहत मिलेको छ । गरिब दुखीहरुका लागि यो अभियान सुरु गरिएको बताउने कुमार राई पछिल्लो समय निकै सामाजिक कार्यमा अघि सर्दै आएका छन । महिनौदेखि चलाइएको सहयोगार्थ कार्यक्रममा मान्छेहरुको भिड दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइएको छ । दमकका होटलहरु बाइक शोरुम लगायतका विभिन्न ठाउँबाट धम्कि आएको बताउदै कुमार भावुक बने ।
अहिलेसम्ममा कति पैसा उठ्यो त अभियानबाट तलको भिडियोमा हेर्नुहोला छक्क पर्नुहुनेछ।